Hetsiky ny polisy sy zandary: sarona ny rongony 50 taonina mahery | NewsMada
Toa tsy mahagaga ihany ny firongatry ny tsy fandriampahalemana, ny heloka bevava, ny habibiana, ny herisetra… Eny, na ny eny anivon’ny tokatrano sasany koa aza. Fantatra mantsy fa efa maherin’ny 50 taonina mahery ny rongony saron’ny mpitandro filaminana (polisy sy zandary) ho an’ny taona 2020 iny.
Anisan’ny nivoitra tamin’ny tatitry ny Praiminisitra Ntsay Christian, omaly, ny momba ny hetsika ataon’ny mpitandro filaminana ny ady atao amin’ny zava-mahadomelina, tamin’ny taona lasa. Fantatra tamin’izany fa nahasarona rongony 10.045 kilao niampy 26 gony ary 217 fonosana ny eo anivon’ny polisim-pirenena. Maherin’ny 46.403 kilao kosa ny zava-mahadomelina tratran’ny zandary, ankoatra ireo fambolena nopotehina. Miisa 380 ireo nosamborina tamin’izany. Midika izany fa efa mahatratra hatrany amin’ny 56 taonina any izany ireo rongony sarona ireo. Tsy ireo ihany anefa fa mbola betsaka ny fivezivezen’izany any anivon’ny fiarahamonina any fa ireo aloha izany izao no sarona.
Herisetra sy fanolanana
Anisan’ny miteraka disadisa sy olana eo anivon’ny fiarahamonina sy ny any anivon’ny tokantrano any ity zava-mahadomelina ity. Mampitombo ny herisetra amin’ny endriny samihafa : fifamonoana an-kitsirano, adin’ny samy tanora, fampiasana fitaovana maranitra (antsy, famaky…). Mampirongatra ny asan-jiolahy na ny dahalo ny fihanak’izany. Mitondra any amin’ny fanolanana : ray na raikely manolana ny ao an-tokantrano, hatramin’ny zazakely; ny havana sy ny fianakaviana, na koa eo anivon’ny mpiray vodirindrina… Tsy mifidy saranga sy taona koa ny fandraisana izany. Ankizy sy tanora eny anivon’ny sekoly, hatramin’ny vehivavy sy ny lehilahy lehibe… Mety mampirongatra izany koa ny olana samihafa iainana : fihibohana, tsy fananana asa…
Mitaky andraikitra amin’ny rehetra
Araka izany, tokony hojerena manokana ny ady atao amin’ity zava-mahadomelina ity. Mety misy ny tambajotra matanjaka. Hatreny ifotony no tokony hidirana an-tsehatra, toy ny any amin’ny velaran-tany fambolena izany. Ny lalam-pirenena izorany sy ifamezivezen’izany. Ireo mpandray ny ambongadiny sy ny mpitsinjara ary hatramin’ireo mpifoka. Mitaky andraikitra amin’ny rehetra izany : mpitandro filaminana, ray aman-dreny, mpanabe, fiangonana, fikambanana, fiaraha-monina ary ny fanjakana amin’ny ankapobeny.